အရသာကောင်း – Grab Love Story
ကျမနာမည်က နွယ်နွယ်ဝင်း.. နွယ် လို့ပဲအတိုခေါက်ခေါ်ကြတယ်။ အသက်က ၂၄ ထဲမှာပေါ့.. အိမ်ထောင်ကျတာ ၃ နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။ ယောက်ကျားက ကိုဆန်းထူးတဲ့။ ကားပွဲစားလုပ်တဲ့သူပါပဲ။ ဆက်မပြောခင် ကျမရဲ့ ခန္တာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေအကြောင်း အကြမ်းဖျဉ်းပြောပြမယ်။ ကျမက အသားအရမ်းမဖြူပေမဲ့ ဝင်းတဲ့အထဲမှာပါတယ်။ ခြေသလုံးတွေ ပေါင်တန်တွေနဲ့ တခြားအတွင်းသားတွေက တရုတ်မတွေလို မဖြူပေမဲ့ဝင်းဝါပြီး ဆွဲဆောင်အားကောင်းတဲ့အထဲမှာပါတယ်။ နောက် ကျမရဲ့နို့လေးတွေက အိမ်ထောင်မကျခင်က အတော်ပြားပြီးသေးတဲ့အထဲမှာပါပေမဲ့နောက်ပိုင်း ကိုဆန်းထူးက လိုးကာနီးတိုင်း နို့တွေကို အသေညှစ်လွန်းတော့ အိမ်ထောင်သက် ၃ နှစ်အတွက် ဆူပြီးမို့လာလိုက်တာ အခုဆိုကိုဆန်းထူးရဲ့ ယောက်ကျားလက်ဝါးနဲ့တောင် ပြည့်ချင်သလိုလိုဖြစ်နေပြီ။ ပြီးတော့ ကျမရဲ့ တင်ပါး၊ ဖင်ပေါ့ .. အရမ်းလှတဲ့အထဲမှာ မပါပေမဲ့ ခါးလေးကသေးပြီး ဗိုက်မထွက်တော့ ဖင်က နောက်ကိုကောက်ပြီးဝိုင်းနေတယ်။ အဲလိုဖြစ်နေတာ ဖင်လှတယ်လို့ ပြောကြမယ်ဆိုရင် ကျမဖင်က ပုရိသတွေကျလောက်တဲ့ ဖင်ကြီး အိုးကြီးမျိုးပါ။ ယောက်ကျားက ခဏ ခဏပြောဖူးတယ် နောက်ကနေ ခါးသေးသေးလေးကိုကိုင်ပြီးဆွဲဆွဲဆောင့်လိုက်တိုင်း ကုန်းထားလို့ နောက်ကိုဆူထွက်နေတဲ့ ဖင်အသားစိုင်တွေက တုံတုံသွားတာကြည့်ပြီး လိုးရတာ အရမ်းသဘောကျဆိုပဲ။ ပြောသေးတယ် နွယ့် အဖုတ်က မျှော့ပါတော့ အရမ်းစွဲတယ်တဲ့။
အစကတော့ သိပ်နားမလည်ခဲ့ပေမဲ့ နောက်ပိုင်း ဘ၀မှာ ကြုံလာရတဲ့ ကာမ ကိစ္စတွေကြောင့် ကျမရဲ့ အဖု အမို့ အထစ် တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ ခန္တာကိုယ်ဟာ ယောက်ကျားတွေအတွက် ဘယ်လောက်တောင် တန်ဖိုးရှိပြီး သူတို့အတွက် အသုံးတော်ခံလို့ကောင်းမှန်းနားလည်လာခဲ့တယ်။ အိမ်ထောင်သက်လေး နည်းနည်းကြာလာတော့ လင်တော်မောင်က အသစ်အဆန်းတွေ အရမ်းထွင်လာတယ်။ နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်လိုးတုန်းကဆို ဘေးတစောင်းအနေအထားအတိုင်းအိပ်ခိုင်းတယ်၊ ပြီးတော့ အပေါ်ဖက်ကခြေထောက်တဖက်ကို ပုဇွန်တုတ်လိုကွေးခိုင်းထားပြီး ဖင်ကိုနောက်ကိုပစ်ခိုင်းတယ်။ သူ့လီးထည့်ဖို့ အပေါ်ဖက်ရောက်နေတဲ့ဖင်ကို အသာပင့်တင်လိုက်တော့ ကျမရဲ့ အဖုတ် ၂ ခြမ်းက ပြူးပြူးလေးပေါ်လာပြီး ဖင်ဝလေးကပါ ဟစိလေးဖြစ်သွားတယ်။ အရည်ကြည်တွေလေးတွေနဲ့ရွဲနေတဲ့ ကျမဆောက်ဖုတ်လေးထဲကို သူ့လီးတေ့ပြီး ဖိချလိုက်တယ်။ အဖုတ်ထဲကို သူ့လီးထည့်ထားလျက်နဲ့ အဖုတ်ထဲကလျှံထွက်လာတဲ့ အရည်ကြည်ကျိချွဲချွဲတွေကို ဖင်ဝမှာသုတ်၊ သူ့လက် ၂ ချောင်းကိုတံတွေးစွတ်ပြီး ဖင်ကိုအဆုံးထိနှိုက်ပြီး ကလိတယ်။ ” အာ.. ကိုဆန်းထူးရယ်.. ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ” ” ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး နွယ်ကလဲ.. နွယ် ဖင်လေးထဲကို လက်နှိုက်ထားပြီးလိုးရတာ အရသာပိုရှိလို့ပါ” ” နွယ်မှ မခံစားတတ်တာ တမျိုးကြီးပဲ ကိုဆန်းထူးရယ်.. ထုတ်လိုက်ပါနော်” တခါမှဖင်နှိုက်ပြီး အလိုးမခံဖူးတော့ အဆန်းဖြစ်ပြီးသာ ငြင်းနေရတာ ကျမရဲ့ ခန္တာကိုယ်က လက်ခံချင်လိုဖြစ်နေတယ်။ ကိုထူးရဲ့လီးက အရမ်းမသေးပေမဲ့ လိုးနေကျဖြစ်နေတာရယ်၊ အဖုတ်ကအရည်တွေ ရွှဲနေတာကြောင့် ခြောင်သလိုခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာ ဖင်ထဲကိုလက်ညှိုးနဲ့ လက်ခလယ်ထည့်ထားတော့ ခက်ကြပ်ကြပ်လေးဖြစ်ပြီး ဖီးလ်ဖြစ်စေတယ်။ ” အား.. ကောင်းလိုက်တာနွယ်ရာ.. အဖုတ်ထဲမှာ ကို့လီးကြီး ဝင်ထွက်နေတာကို နှိုက်ထားတဲ့လက်မှာခံစားမိတယ် သိလား” ” အင်းး.. ဟင်းး. ” ကျမလဲ မကောင်းဘူး ကောင်းတယ် ဘာမှမပြောတော့ပဲ ခပ်ကြပ်ကြပ်လေးဖြစ်နေတဲ့အရသာကိုခံစားရင်း ညီးညူမိတယ်။ ဆောင့်ချက်တွေက ပြင်းထန်ပြီးမြန်လာတယ်။
ဖင်ထဲကလက် ၂ ချောင်းကလဲ အငြိမ်မနေပဲ လှည့်မွှေပေးပြီး ထုတ်လိုက်သွင်းလိုက်လုပ်နေတယ်။ ကျမအောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံး ခါယမ်းနေပြီးဖင်လေးလဲ ကြိမ်းလာတယ်။ အဖုတ်ထဲမှာလဲကြပ်နေပြီး အဖုတ်နံရံတွေနဲ့ ကိုဆန်းထူးလီးနဲ့ ထိတွေ့မှုတွေကို ပိုပိုခံစားလာရတယ်..။ အဲနေ့က ကျမ တော်တော်လေးကောင်းအောင် ပြီးလိုက်ရပါတယ်။ ကိဆန်းထူးက ပြီးခါနီးတော့ သူ့လီးကိုအဖုတ်ထဲက ထုတ်ပြီး ကျမကို တစောင်းအနေအထားကနေ ပက်လက်လှန်ခိုင်းတယ်။ ပြီးတော့ဗိုက်ပေါ်တတ်ခွပြီး သူ့လီးနဲ့ နို့တွေကိုချိန်ပြီး ၁ ချက် ၂ ချက်လောက်ဂွင်းတိုက်လိုက်တာ ထွက်လာလိုက်တဲ့ လရည်တွေများနို့ ပေါ်တင်မကဘူး မေးစေ့နဲ့ ပါးပေါ်ထိရောက်တယ်။ ” ကိုထူးကကွာ.. မပြောမဆိုနဲ့.. ဒီမှာ အကုန်ပေကုန်ပြီ” ” နွယ် ကလဲ ကို့လရည်ပဲဟာကို ဘာဖြစ်လဲ.. တချို့အတွဲတွေဆို ပါးစပ်ထဲတောင် ထည့်ပြီးကြသေးတာပဲ” နောက်ပိုင်း ကိုထူးရဲ့ အဆန်းထွင်မှုတွေကို တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပိုကြမ်းလာတယ်။ သူ့အကြိုက်ဆုံး အနေအထား က လေးဖက်ထောက်ကုန်းခိုင်းတာပဲ။ ဖင်လုံးလေးကို လက် ၂ ဖက်နဲ့ဖြဲပြီး ဆောင့်လိုက်တိုင်း ဟစိ ဟစိဖြစ်နေတဲ့ ဖင်ဝလေးကိုကြည့်ပြီးလိုးတယ်၊ အဲဒါမှ အားမရသေးရင် ဖင်ပေါက်လေးထဲကို လက်နှိုက်ပြီးအဖုတ်ကို အသကုန်ဆောင့်တယ်။ နောက်ပိုင်း သူ့လီးဒစ် အရွယ် နဲ့မတိမ်းမယိမ်းအရွယ်ရှိတဲ့ ခရမ်းသီးနဲ့ ကျမဖင်လေးထဲထိုးထည့်ထားပြီး သူ့လီးနဲ့ အဖုတ်ကိုဆောင့်တယ်။ ကျမ ဘယ်လိုတားတား မရတဲ့အဆုံး ဖြည်းဖြည်းထည့်ပါလို့ အသနားခံပြီး ဖင်ထဲကို ခရမ်းသီးအထည့်ခံလိုက်တယ်။ ” ကောင်းလိုက်တာကွာ. စီးပိုင်နေတာပဲ” ” အာ.. ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ ကိုရယ်.. ” ” ဖင်ထဲကဟာကြီးကကြပ်တယ် ဖြုတ်လိုက်တော့မယ်နော်…” ” မဖြုတ်နဲ့ မဖြုတ်နဲ့.. နွယ် ကို လီး ၂ ချောင်းနဲ့ လိုးနေသလို မှန်းပြီး လုပ်နေတာ…” ” ရှင်…..” ကိုဆန်းထူး ရုတ်တရက်ပြောလိုက်တဲ့ စကားကြောင့် နွယ် အကြီးအကျယ် တုန်လှုပ်သွားသည်။ စိတ်ထဲမှာ တခြားတစ်ယောက် ငါ့ကိုလိုးတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်ဝင်လာသည်။ ကိုဆန်းထူးရဲ့ အဆန်းထွင်ချင်တဲ့ လိင်စိတ်တွေ အဆုံးအစ မဲ့နေတာသိလိုက်ရတယ်။ စိတ်ထဲမှာ ဝမ်းနည်းရမှာလိုလို ရင်ခုန်ရသလိုလိုနဲ့ဇဝေဇဝါဖြစ်သွားတယ်။ ဒီလောက်ဖြစ်လှတဲ့ ယောက်ကျားကို အကဲစမ်းချင်သွားတာနဲ့ ကျမလဲ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲမေးလိုက်တယ်။ ” နွယ် ကို တခြားယောက်ကျားတစ်ယောက်က သူ့လီးကြီးနဲ့ နွယ်ဖင်လေးထဲကို ဆောင့်လိုးနေတယ်ဆိုပြီးမှန်းနေတာလား ကိုထူးရယ်…” စကားအဆုံးမှာပဲ ကိုဆန်းထူးလီးက သိသိသာသာကိုတုတ်ထွား ပိုမာတောင့်လာပြီး ဆောင့်ချက်တွေကလဲ ပြင်းထန်လာတယ်။ ” အားး ကောင်းလိုက်တာ .. မိန်းမရယ်.. အင့် ကွာ.. အင့် အင့်..” ဖင်ထဲက ခရမ်းသီးပြုတ် မထွက်အောင် လက်နဲ့ဖိထိုးထည့်ထားပြီး ဆက်တိုက်ဆောင့်တော့တယ်။
ကျမ အတော်ကို ခံစားလိုက်ရတယ်။ လီးကလဲ မာ.. ခရမ်းသီးကလဲ ဖင်ထဲမှာတင်းပြီးကြပ်။ ကြည့်ရတာ ကိုဆန်းထူး ကျမကို တခြားယောက်ကျားနဲ့ ပေးလိုးချင်နေပြီလို့ ရိပ်မိလာတယ်။ အချက် ၂၀ လောက်မနားတမ်းဆောင့်ပြီးတော့ထုံးစံအတိုင်း လရည်တွေကို နို့ပေါ်လာပန်းတယ်..။ ဒီတခါ မျက်နှာပေါ်ထိရောက်တယ်။ ပါးတွေပေါ်မှာ လရည်တွေ ပွနေအောင် ပန်းသွားတယ်။ကိုဆန်းထူးရဲ့ အဆန်းထွင်မှုတွေကြောင့် ကျမရဲ့ လိင်မှုဘ၀ ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ အသိအမြင်စုံလာခဲ့ရပါတယ်။ ကျမကိုယ်တိုင်ကလဲ သူလုပ်ချင်တာကို ငြင်းဆန်ဖို့ခက်ခဲခဲ့တာကြောင့် သူကပိုပိုပြီး အတင့်ရဲလာခဲ့တယ်။ တရက်တော့ ၂ ယောက်သားလိုးပြီးလို့ အမောဖြေနေတုန်း သူကပြောလာတယ်။ ” နွယ့် ကို သူများလိုးတာ မြင်ချင်လိုက်တာကွာ..” သူကို မရဲတရဲ မျက်စောင်းထိုးရင်း.. ” ကိုထူးက ကြည်ဖြူတယ်လား..” ” ဪ.. နွယ် ကိုယ်တိုင်လိုလိုလားလား ခံချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်က ကြည်ဖြူရမှာပေါ့..” ” အံမယ် ပြောပုံက နွယ် ကပဲ သူများလိုးတာခံချင်လို့ ကိုထူးဆီခွင့်တောင်းနေရသလိုလိုနဲ့.. ဟွန်း..” ” နွယ် ကရော အပြောင်းအလဲလေး မခံစားချင်ဘူးလား တခြားလီးတစ်ချောင်းချောင်းနဲ့..” ကျမ ဘာမှ မပြောပဲ အသာပဲ ငြိမ်နေလိုက်သည်။ ” ကို့အသိထဲမှာလဲ ဒီကိစ္စပြောဖို့အတွက် အရမ်းရင်းနီးတဲ့သူကရှားနေတာ နွယ်ရဲ့..” ” အန်.. ကိုထူးပြောချင်တာက နွယ် ကပဲ အပြင်ထွက် ယောက်ျားရှာပြီး အကိုရယ် အိမ်ခဏလိုက်ခဲ့ပြီး ကျမကို လိုးပေးပါလို့ ပြောပြီးခေါ်ခဲ့ရမှာလား.. ” အဲလို သူ့ကိုရွဲ့ပြီး တစ်တစ်ခွခွပြောလိုက်တော့ သူက ရယ်ကျဲကျဲလုပ်ပြီး ” အင်း.. ဒါလဲကောင်းတာပဲ ကိုယ်ခေါ်လာတဲ့သူဆို နွယ်မကြိုက်တာ ဘာညာ ဖြစ်နေမှာ.. နွယ် စိတ်တိုင်းကျဖြစ်တဲ့သူကို နွယ် ဖာသာရွေးပြီး လှုပ်ရှားခဲ့ပေါ့” ဒီလိုပဲ ပြောကြဆိုကြရင်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကျမကို တခြားယောက်ကျား တက်လိုးမဲ့အစီအစဉ်က စကားအဖြစ်ကနေတကယ် လက်တွေ့စမ်းသပ်ဖို့အထိဖြစ်လာခဲ့တယ်လေ။
ကျမကိုယ်တိုင်လဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မယုံနိုင်ဘူး။ တစ်သက်နဲ့ တစ်ကိုယ် ကိုဆန်းထူးလီးကိုပဲ ထဲထဲဝင်ဝင် မြင်ဖူး ကိုင်ဖူး ခံဖူးတာ။ တခြားယောက်ျားလီး ဆိုတဲ့ အတွေးဝင်လာရင် စိတ်ထဲကလက်မခံချင်ပေမဲ့ တကယ့် မသိစိတ်နဲ့ ခန္တာကိုယ်က အိနြေ္ဒမရ ဖြစ်ပြီး အဖုတ်ထဲမှ စိုစိစိဖြစ်လာနေတယ်။ ဒါကိုလဲ ဝဋ်နာကံနာလို့ပြောလို့ရမလား မသိဘူး။ တခြားယောက်ကျား တစ်ယောက်ရဲ့ လီးကို အပြင်မှာလက်တွေမြင်ဖူးချင်လာတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ယောက်ကျားက တဂျီဂျီပူစာတာတပိုင်း ကိုယ်တိုင်ကလဲ တခြားလီးနဲ့ စမ်းချင်တာတပိုင်းဆိုတော့ ကျမကို လိုးဖို့အတွက်သီးသန့် ယောက်ျား တစ်ယောက် အမြန်ရှာရပြီလေ။ ကျမက ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္မဏီတစ်ခုမှာ အရောင်းတာဝန်ခံ။ အိန္ဒိယကထုတ်တဲ့ ဆေးဝါးတွေကိုဖြန့်တဲ့အပိုင်းမှာ လုပ်ရတယ်။ ကျမတို့ company က သာမာန် company တွေထက်ကြီးတော့ branch office တွေများတယ်။ တကယ့် ရုံးချုပ်က India မှာရှိတယ်။ ရန်ကုန်မှာ Main branch ထားပြီး အခုကျမနေတဲ့ နယ်မြို့လေးကတော့ လက်ခွဲပေါ့။ ကျမအထက်က sale manager က ဒေါက်တာ ဘစီတဲ့။ အသက် ၄၀ နီးပါးတော့ရှိမယ်ထင်တယ်။ မိန်းမရှိဖူးတယ်။
အခုတော့ကွဲသွားပြီး တကိုယ်တည်းနေနေတာပေါ့။ အရင်ကတော့ သိပ်ပြီး မသိသာပေမဲ့ ဒီနောက်ပိုင်း ကိုဘစီ တစ်ယောက် အမူအယာတွေပျက်နေတာသတိထားမိတယ်။ ကိုယ့်ကို ကြည့်တဲ့အကြည့်တွေက တခါတလေ နေရာတွေမှားနေတတ်တယ်။ ပြောသာ ပြောရတာ ကျမကိုယ်တိုင်ကလဲ ကျမ ယောက်ကျားနဲ့ ပြောထားတဲ့ကိစ္စ အကောင်အထည်ဖော်ရမယ်ဆိုကတည်းက ဝတ်ပုံစားပုံနဲ့ အမူအယာကို နည်းနည်းပြောင်းထားတယ်လေ။ တခါတလေ စကပ်အတိုကို ခပ်တင်းတင်းဝတ်ပြီး သူ့ရှေ့မှာ ခပ်ရွရွလေး လမ်းလျှာက်ပြတယ်။ သူ့အလုပ်စားပွဲနားရောက်ရင် ဘောပင်ကျချင်ယောင်ဆောင်ပြီး တင်းနေတဲ့ နို့တွေမြင်အောင် ကုန်းကောက်တယ်။ ပြန်အထမှာ ခုံကိုအားယူပြီး ထလို့ရရဲ့နဲ့ သူ့ပေါင်ပေါ်ကိုလက်ထောက်ပြီးထ ပြတယ်။ ကျမရဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့ ဝတ်ပုံစားပုံတွေ၊ အမူအယာတွေ နဲ့ မျက်လုံးအကြည့်တွေကို ရုံးမှာရှိတဲ့ပုရိသတချို့ရိပ်မိလာကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့် level က supervisor ဆိုတော့ အရမ်းမဝင်ရဲကြဘူး။ တရက်သားတော့ Manager ကိုဘစီက သူ့ computer ထဲက file တချို့ကို copy ကူးခိုင်းလို့ သူ့ computer မှာထိုင်ပြီး သူပြောတဲ့ folder ထဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်တယ်။ အား ပါ ပါးး.. မနည်း မနော အပြာလိုးဇာတ်ကားတွေ တွေ့လိုက်ရတယ်..။ ရုတ်တရက် မျက်စိရှက်သလိုဖြစ်သွားပေမဲ့ အကြည့်ကိုလွှဲမပြစ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ကျမလဲ အခန်းထဲလူရှင်းတာနဲ့ တွေ့ရာဇာတ်ကားကို click ခေါက်ပြီး ဖွင့်ကြည့်မိတယ်။ အမျိုးသမီးငယ်ငယ်လေးက အတော်အတန်တုတ်တဲ့လီးကို ပုလွေပေးတဲ့ဇာတ်လမ်း။ ဇာတ်လမ်းထဲကလီးကြီးက မာပြီးတောင်နေတာပဲ..။ ကောင်မလေးခမျှာ လီးကြီးကို ပါးစပ်ထဲထည့်ပြီး အသက်ရှူမ၀တ၀နဲ့ စုတ်ပေးနေရတယ်။
ရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင် ကောင်မလေးက လီးစုတ်နေတာမဟုတ်ပဲ လီးကြီးနဲ့ ကောင်မလေး ပါးစပ်ကိုလိုးနေသလိုပဲ..။ ကျမလဲ ကြည့်နေရင်းနဲ့ ကြက်သီးထမိသလိုလို ရေဆာသလိုလိုနဲ့ အာခေါင်တွေတောင် ခြောက်လာတယ်။ အပြာဇာတ်ကားကို အာရုံတွေဝင်စားပြီး ဖီလ်းလာနေတဲ့ကျမက ဘယ်အချိန်ကတည်းက ကိုယ့်နားရောက်နေမှန်းမသိတဲ့ Manager ကိုဘစီကို သတိမထားမိလိုက်ဘူး..။ ” ဟဲ့.. နွယ်နွယ်ဝင်း ငါ့စက်မှာထိုင်ပြီး ဘာတွေကြည့်နေတာလဲ…” ” အမလေး..!! ရှင်.. ဘစီ” တစ်ကိုယ်လုံး ထူပူ… ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်း မသိ ဖြစ်ပြီး ဖွင့်ထားတဲ့ အောကားကို အမြန်မြန်ပိတ်ပြီး.. ” ဟို.. ဟို.. ကိုဘစီ ကူးခိုင်းတဲ့ ဖိုင်လ် .. အဲဒါ လာကူးရင်းနဲ့.. အဲဒါ..” ” အောကားမှန်း သိသိနဲ့ကြည့်နေတာ အကြာကြီးပဲ.. ရုံးချိန်ကြီးမှာ အတော်လေး ထန်နေတယ်ပေါ့လေ.. ” ” ဟို.. အဲလိုမဟုတ်ပါဘူး ကိုဘစီကလဲ.. ဒီလိုပဲကြည့်ဖြစ်သွားတာပါ” ” အာ့ဆိုလဲ ပြောစမ်းပါအုံး.. နင်ကြည့်နေတာ ဘာကားလဲ..” ကိုဘစီ က သိသိကြီးနဲ့မေးလိုက်တယ်။ ကျမကြည့်နေတာ ကောင်မလေးက လီးတုတ်တုတ်ကြီးကို မဆံ့မပြဲစုတ်ပေးနေတဲ့ ကားပါလို့ တစိမ်းယောက်ကျားတစ်ယောက်ကို ပြောထွက်ဖို့ ခက်ခဲနေခဲ့တယ်။ ” ဟို.. ဟိုလေ.. ကောင်မလေးက.. ဟိုဟာကို ဟိုလိုလုပ်ပေးတာ… အဲဒါ.. ” ” နင်ကလဲ ဟိုဟာတွေ ဟိုလိုတွေနဲ့ ထပ်နေတာပဲ.. ပြောဇမ်းပါ ပြောစရာရှိတာ..” ” အာ.. ကိုဘစီ ကလည် နွယ် ရှက်လာပြီ.. သိရဲ့သားနဲ့ လာမေးနေတာကို.. ဟွန့်…” ကျမ နည်းနည်းနွဲ့ပြလိုက်တယ်တော့ ကိုဘစီ လည်း ရင်ခုန်သွားတဲ့ပုံဖြစ်သွားတယ်.. ” အာ့ဆိုလဲ ငါ့ကိုပြ ငါတို့ အတူတူကြည့်ရအောင်.. ” ” တော်ပါပြီ.. ကိုဘစီဖာသာ တစ်ယောက်ထဲကြည့်ပါ့လား.. နွယ်က ကြည့်စရာလား” ” အံမယ်.. အခုမှလာရှက်ပြနေတယ်.. စောနကဖြင့် ပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့ မျက်တောင် မခက်တမ်းကြည့်နေတာ ဘယ်က ကောင်မလေးလဲ ပြော..” ” အာ… ကိုဘစီ မကောင်းဘူးကွာ.. ဘာတွေလာပြောနေတာလဲ.. သွား.. ဟွန့်…” ကျမလဲ ကိုဘစီ အလုပ်စားပွဲနေရာမှာ ထိုင်နေရာကနေ မက်တပ်ရပ်နေတဲ့ ကိုဘစီ ကို ရှက်ကိုးရှက်ကမ်း အမူအယာလေးနဲ့ လက်နဲ့လှမ်းပုတ်လိုက်တယ်..။
ဖြစ်ချင်တော့ ကိုဘစီ က ရုတ်တရက်နောက်ဆုတ်ပြီးရှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ပုတ်လိုက်တဲ့လက်က ကိုဘစီရဲ့ လီးနေရာကိုသွားပွတ်မိသလိုဖြစ်သွားတယ်..။ ” အယ်.. ဒီကောင်မလေး ဘယ်ကိုလာကိုင်တာလဲ..” ” အာ. မဟုတ်ဘူး ကိုဘစီ…နွယ် ကဒီလိုပဲ လှမ်းရိုက်လိုက်တာ..” ကျမ ပြောလို့ မဆုံးသေးခင်မှာပဲ ကိုဘစီက သူ့ဘောင်းဘီခါးပတ်ကိုဖြုတ်၊ အတွင်းခံကိုပါ တခါထဲချွတ်ချလိုက်ပြီး လီးကြီးကို ဆွဲထုတ်ပြလိုက်တယ်..။ သူ့အလုပ်ခန်းက မှန်ခန်းဆိုပေမဲ့ မှန်က အမှုန်ဆိုတော့ အပြင်က ဘာမှမမြင်ရဘူးလေ။ စနေနေ့လဲဖြစ်တော့ တချို့အောက်ခြေဝန်းထမ်းလေးတွေက နေ့တစ်ဝက်နဲ့ ပြန်သွားကြပြီ။ ” အမလေးး.. ကိုဘစီ ဘာကြီးလဲ.. ဘာလုပ်တာလဲ.. ” ပါးစပ်ကသာ ပြောနေပေမဲ့ မျက်လုံးက ကိုဘစီရဲ့ အကြောတွေတင်းပြီး အထက်ကိုကော့နေတဲ့ လီးကြီးဆီကနေ မခွာနိုင်ခဲ့ဘူး.။ ကျမ အရမ်းမြင်ဖူးချင်နေတဲ့ တခြားယောက်ကျားတစ်ယောက်ရဲ့လီးကို ကိုယ့်မျက်နှာနဲ့ ၁ ပေလောက်အကွာကနေ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နေရပါပြီ။ ဒစ်ကြီးက သိသိသာသာထွားပြီး လီးတစ်လျှောက် အကြောအပြိုင်းပြိုင်းထနေတယ်။ လမွှေးတွေကို ပုံမှန်ရိတ်လို့ လီးရဲ့ အရှည်ကို ပိုပြီးပေါ်လွင်နေတယ်။ အရှည်က အရင်းကနေ အဖျားထိ ၇ လက်မခွဲကျော်ကျော် ၈ လက်မလောက်ရှိမယ်ဆို လုံးပါတ်က ဝါးလုံးရင်းလောက် တော့ အသာလေးရှိတယ်။ ဘယ်လိုကြည့်ကြည့် အိမ်ကယောက်ကျားရဲ့ လီးထက် အရှည်.. လုံးပတ်.. အစစ သာလွန်နေတယ်။
ကိုဘစီက တရုတ်စပ်တော့ လီးကကျမယောက်ကျားလီးထက်ဖြူနေတာပိုသေးတယ်။ ” နင်ပဲလာကိုင်ပြီးတော့ .. ရော့ဒီမှာ နင်ကြည့်နေတဲ့ ကားထဲကဟာနဲ့ ငါ့လီးနဲ့ ဘယ်သူက ပိုကြီးလဲ..” ” အို.. ကိုဘစီကလဲ.. ဘာတွေပြောနေမှန်း မသိဘူး .. ကိုဘစီဟာကြီးကို ပြန်ထည့်ထားလိုက်စမ်းပါ လူတွေမြင်ကုန်လို့ အရှက်ကွဲနေအုံးမယ်..” ” ငါပြောမယ် နွယ်နွယ်ဝင်း.. ငါ့အခန်းထဲ ဘယ်သူမှ ငါခွင့်မပြုပဲ မဝင်ရဲဘူး.. ဘယ်သူမှလဲ လာစရာမရှိဘူး.. နင် အောကားတွေ ကြည့်တယ်ဆိုတာသာ ငါဖွလိုက်မှ နင်ပဲအရှက်ကွဲမှာ” ကိုဘစီက အကြပ်ကိုင်သလိုပြောတော့ ကျမလဲ ကြံရာ မရဖြစ်သွားတယ်..။ ” အင်းပါ ကိုဘစီရယ် .. လိမ္မာပါတယ်.. အဲဒါကြီးကို ကျမ မျက်နှာနားကနေ ဖယ်ပြီး ဘောင်းဘီထဲပြန်ထည့်လိုက်ပါနော်…..” ကျမလဲ ကိုဘစီလီးကြီးကို ကြည့်လို့ မ၀နိုင်သေးပေမဲ့ အရမ်းအပေါစားဆန်သွားမှာစိုးလို့ နည်းနည်းမူလိုက်တယ်.. ” အေးလေ.. ပြီးတာပဲ.. တနင်္လာနေ့ နင်ရုံးလာရင် ရုံးက ကောင်လေးတွေ နင့်ကို ဘာပြောကြမလဲ စောင့်ကြည့်လိုက်တော့ ဒါဆို..” ” ခက်တော့တာပဲ ကိုဘစီရယ်. ကဲပြော နွယ် ဘာလုပ်ပေးရမှာလဲ…” ” ရော့.. ငါ့လီးကြီးကို သေချာကိုင်ကြည့်ပြီး နင့်ရဲ့ အမြင်ကိုပြောပြပေး.. နင့် ယောက်ျားလီးနဲ့ ဘာကွာလဲတို့ ဘာတို့ပေါ့.. ဟဲ ဟဲ ဟဲ..” ” အဟင့်… ကိုဘစီက အရမ်းနှိပ်စက်တာပဲ.. ဒီလိုလုပ်.. ကိုဘစီရုံးခန်းထဲမှာတော့ မလုပ်ချင်ဘူး.. စိတ်ထဲမှာ မလုံခြုံသလိုဖြစ်လို့.. အဲဒါ..” ” ရတယ်လေ.. အဲဒါဆို အပေါ်ထပ်က အင်တာဗျူးလုပ်တဲ့ မီတင်ခန်းအသေးထဲမှာ ငါစောင့်နေမယ်… နင်အခုတတ်လာခဲ့.. ဟုတ်ပြီလား.” ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ ကိုဘစီက သူ့လီးကြီးကို အတွင်းခံထဲ ခွေခေါက်ထည့်ပြီး ဘောင်းဘီပြန်ဝတ်ကာ ပြည့်တီတီအပြုံးနဲ့ အခန်းထဲကထွက်သွားတယ်။
ကျမလဲ ရင်ထဲမှာ တလှပ်လှပ်ဖြစ်ပြီး အဲကွန်းခန်းထဲမှာ ဇောချွေးတွေပြန်နေတော့တယ်။ မသွားလို့ကလဲ မဖြစ်.. တစ်စိမ်းတစ်ယောက်ရဲ့လီးကြီးနဲ့ နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ တွေ့ရမှာလဲကြောက်..။ စိတ်ကသာ လှုပ်ရှားပြီး ဝေခွဲမရဖြစ်နေတာ.. ကျမရဲ့ ခန္တာကိုယ်က တော့ စိတ်ချရတယ်ရယ်.. အဖုတ်ထဲမှာ ပြောစရာမလိုအောင် စိုစိစိဖြစ်နေပြီ..။ လာမဲ့ ဘေးပြေးတွေ့မဟုတ်ပဲ.. လာမဲ့ လီး ပြေးစုတ် ဆိုသလို.. မဖြစ်မနေ ကြုံတွေ့လာရတော့မဲ့ တစိမ်းယောက်ျားတစ်ယောက် ရဲ့လီးကြီးကြီးကို ပြုစုပေးရဖို့အတွက် လေးလံနေတဲ့ ခြေလှမ်းတွေနဲ့ အတူ ကိုဘစီရှိတဲ့ အခန်းငယ်လေးဆီကို တရွေ့ရွေ့လှမ်းလာနေရပါတော့တယ်…။ အဲ့နေ့က အိမ်ပြန်နောက်ကျခဲ့ပါတယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ယောက်ျားဖြစ်သူ ကိုဆန်းထူးတစ်ယောက်ကတော့ ဆိုဖာပေါ်မှာ ဇိမ်ကျကျထိုင်ရင်း TV ကြည့်နေလေရဲ့..။ ဒီနေ့ ကျမကို ရုံးက ဂျာကြီးကလိုးလွတ်လိုက်လို့ အလကားဖာခံလာရတယ် လို့သာပြောလိုက်ရင် ဘယ်လိုနေမယ် မသိ..။ သူဖာသာသူ ဘယ်လိုနေနေ နှစ် ယောက်လုံးစိတ်တူကိုယ်တူနဲ့ ဆုံးဖြတ်ထားတာဆိုတော့ ပြောပြမှတော့ဖြစ်မယ်။ ဒင်းကို ကိုဘစီနဲ့ ကျမ ပယ်ပယ်နယ်နယ် လိုးခဲ့ကြပုံတွေ ကို ပြောပြဖို့ အစချီလိုက်တယ်။ ” အင်းး.. ပင်ပန်းလိုက်တာ ယောက်ျားရယ်..” ကိုထူးက ဘာမှပြန်မပြော.. အေးဆေး တီဗွီဆက်ကြည့်နေတာနဲ့ ကျမလဲ တဆင့်တတ်ပြီး..။ ” ပင်ပန်းလွန်းလို့ လမ်းတောင် ကောင်းကောင်း မလျှောက်နိုင်ဘူးး.. ကွ တ တ ဖြစ်နေတယ်..” တကယ်လဲ ကွတတဖြစ်နေတာပါ။ ကိုဘစီလီးကြီးက ခံဖူးနေကျ ကိုဆန်းထူးလီးထက် သိသိသာသာ ရှည်ပြီး တုတ်နေတော့ ကျမအဖုတ်မှာ အရည်ရွှဲနေတာတောင် ကျိန်းစပ်ပြီးကျန်နေခဲ့တာလေ..။ ” မင်းပင်ပန်းတာကလဲ တမျိုးကြီးပါလား .. ဘာတဲ့ ကွ တ တ ဟုတ်လား..” ” ဟုတ်တယ်လေ.. ၈ လက်မနီးနီးရှည်တဲ့ လီးတုတ်တုတ်ကြီးနဲ့ ပယ်ပယ်နယ်နယ် အလိုးခံလာရတဲ့ တော့်မိန်းမ မပင်ပန်းပဲနေမလား.. ဟွန့်..” ကျမလဲ ဂွင်တဲ့တုန်း ပြောပြစ်လိုက်တယ်..။ ကိုထူး ခမျှာ လက်ထဲမှာ ကိုင်ထားတဲ့ TV remote cotrol တောင်လွတ်ကျသွားတယ်လေ..။ ” ဘာ..!! ဘယ်လို.. နွယ် .. ဘာပြောလိုက်တယ်..။” ရုတ်တရက် မထင်မှတ်ထားတဲ့ စကားမို့ ကိုထူးလဲ စကားတွေတုန်ပြီး အထစ်ထစ်အငေါ့ငေ့ါဖြစ်နေတယ်။
” အင်းး.. ဟုတ်တယ် ကိုထူးရယ်.. နွယ်တို့ရုံးက မန်နေဂျာ ကိုဘစီသိတယ်မလား..” ” အေး.. သိတယ်လေ.. တခါတလေ နွယ်ကို ရုံးလိုက်ပို့ရင် တွေ့ဖူးတယ်။” ” အင်း.. သူက နွယ်ကို လိုးတာ.. နွယ် သူနဲ့ နေလာခဲ့တယ် ကိုထူး..” သွေးသား ဆန္ဒအရ လိုးခဲ့ရပေမဲ့ ကိုယ့်ယောက်ျားမဟုတ်သူ တစ်ခြား ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ အလိုးကိုခံလာရတယ်ဆိုတာ တွေးမိရင် စိတ်ထဲမှာ ဝမ်းနည်းသလိုလို ရှက်သလိုလိုတော့ ဖြစ်မိပါတယ်။ ပိုဆိုးတာက ယောက်ျားကိုလဲ ပေးသိမှဖြစ်မဲ့ ကိစ္စဖြစ်နေတော့ ကျမ ကိုဘစီအလိုးကို ဘယ်လိုဘယ်ပုံစံ လိုးခံပေးခဲ့ရတယ်ဆိုတာကို အသေးစိတ်ပြောပြရတာ ရင်ထဲမှာ လေးလံလှပါတယ်။ “ဟာ… အဟုတ်လား. တကယ်လား.. ” ” ဘာလဲ ကိုထူးက မယုံဘူးလား.. ဒီမယ် နောက်ကျနေလို့ အမြန်မြန်ပြန်လာခဲ့ရတယ်.. အဖုတ်ထဲမှာ လရည်တွေ စိုဇိဇိနဲ့ အခုထိရှိသေးတယ်..” ကျမ စကားလဲဆုံးတော့ ကိုဆန်းထူးရဲ့ မျက်နှာကြီးက နီရဲနေပြီး ကျမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို ဝါးစားမတတ် ကြည့်နေတယ်။ တံတွေးမြိုချရင်း ခါးပုံစအောက်လက်နှိုက်လိုက်တာ တွေ့လိုက်ရတယ်။ ကြည့်ရတာ ကျမနဲ့ ကိုဘစီလိုးတာကို သူမှန်းပြီး လီးတောင်လာတယ် ထင်တယ်။ အဲဒါနဲ့ ကျမလဲ ဆက်ပြီး.. ” ကိုထူး မယုံလဲ ဒီအတိုင်းပဲ ထားလိုက်တော့ နွယ် အဖုတ်ထဲက လရည်တွေဆေးရင်း ရေချိုးပြီး နားလိုက်အုံးမယ်.. ” ” နေ.. နေပါအုံး နွယ်လေးရယ်.. ကို.. ကိုထူးယုံပါတယ်.. ဘယ်လိုတွေဖြစ်ကြတာလဲ အသေးစိတ်ပြောပြပါအုံး.. နော်.. ” ” နွယ် ပြောပြရင် ကိုထူး စိတ်မဆိုးရဘူးနော်.. ကိုထူး ခွင့်မလွတ်နိုင်မှာစိုးတယ်..” ” အာ.. ရတယ် နွယ် ပြောစရာရှိတာ ပြော…” ကိုထူးက သူ့ပုဆိုးအောက်က လီးကိုနှိုက်ရင်း အရမ်းသိချင်နေတဲ့ပုံနဲ့ ပြောခိုင်းနေတော့ ကျမလဲ ကိုဘစီ computer ထဲက အောကား ကနေစပြီး ကိုဘစီက ကျမကို လိုးဖို့ ချိန်းလိုက်တဲ့ Interview အခန်းထဲရောက်တဲ့ အထိပြောပြလိုက်တယ်.. ” အဲဒါနဲ့ နွယ် က အဲ့အခန်းထဲရောက်သွားတော့ ဘာတွေဆက်ဖြစ်တာလဲ.. ပြောပါ မြန် မြန်..” ” မလောပါနဲ့ ကိုထူးရယ်.. ပြောပြပါ့မယ်..” ” နွယ် အခန်းထဲလဲရောက်ရော ကိုဘစီက တံခါးကို lock ချပြီး နွယ်ကို နံရံနဲ့ ကပ်အောင် အသာတွန်းပြီး ကစ်ဆင် စဆွဲတယ်..” ” နွယ်လဲ အစက ရှက်တော့ ရုန်းပေမဲ့ သူ့အားကြီးကို မလွန်ဆန်နိုင်ဘူး.. ပြီးတော့ သူက နွယ် လျှာတွေကို အတင်းစုပ်တယ်..” ” နွယ် နို့တွေကို အတင်းညှစ်တယ်… နွယ် တအားနာလို့ အော်ရတယ် သိလား.. သူလုပ်နေတာတွေက အရမ်းမြန်တယ်..” ” သူက ဆက်တိုက်တွေလုပ်တော့ နွယ် တော်တော်လေး စိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်.. ကိုထူး စိတ်မဆိုးပါနဲ့.. နွယ် တကယ် စိတ်ပါသွားတာ..” ” အဲဒါတင် မပြီးသေးဘူး သူက နွယ် စကပ်အတိုလေးကို ပင့်တင်ပြီး ဖင်တွေကိုပွတ်သပ်ပြီး ဖင်လုံး ၂ လုံးကို သူ့လက်ဝါးကြီးနဲ့တအားရိုက်ရိုက် ပြီး ဆွဲဆွဲညှစ်သေးတယ်..” ” ကိုဘစီက အရမ်းကြမ်းတယ်သိလား.. အစကဆို ကြောက်တောင်ကြောက်တယ်.. မသိရင် မုဒိမ်းကျင့်ခံရသလိုပဲ ကိုထူးရယ်..” ” သူကပြောသေးတယ်.. နွယ် ဖင်အိုးက နောက်ကိုလုံးထွက်နေတာပဲတဲ့.. အရမ်းကြိုက်တယ်တဲ့.. စတွေ့ကတည်းက ဖင်ကြီးကို သတိထားမိတယ်တဲ့..” ” သူက ပြောလဲ ပြော လက်တွေကလဲ အငြိမ်မနေဘူး သိလား.. နွယ် ဖင်နဲ့ နို့ဆိုတာ နားကို မနားရဘူး အကိုင်ခံ အရိုက်ခံရတာဆိုတာ ပြောမနေနဲ့..” ” အလိုမျိုးကြီး မကြုံဖူးတော့နွယ်လဲ တော်တော်လေး စိတ်ပါမိတယ်။
ပိုဆိုးတာက သူ့လီးကြီးကို နွယ်ကို ကိုင်ခိုင်းထားသေးတယ် သိလား..” ” နွယ်လဲ သူပြုသမျှနုရရင်းနဲ့ သူ့လီးကြီးကို ဂွင်းတိုက်ပေးမိတယ်..” ကိုထူးလည်း ပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့ နားထောင်ရင်း သူ့လီးလေးသူညှစ်နေရင်းနဲ့ မေးတယ်.. ” သူ.. သူ့လီးက ကြီးလားး.. ဟင် နွယ်..” “အင်း.. ကိုထူးရယ်.. နွယ် ပြောရင် စိတ်မဆိုးနဲ့.. သူ့ဟာကြီးက ကိုထူးလီးထက် ရှည်လဲ ရှည်တယ် တုတ်လဲ တုတ်တယ်.. ဒီလောက်လောက်တော့ရှိမယ်..” ကျမလည်း လက်ညှိုးနဲ့ လက်မကို မထိပဲဟထားပြီး ဝိုင်းပြလိုက်တယ်.. ကိုဘစီရဲ့ လီး အရွယ်ကို ကိုထူးမှန်းနိုင်အောင် ပြပေးလိုက်တယ်..။ “အင်းပါ… အဲဒါနဲ့ ပြောပါအုံးဟာ.. ဆက်ပြီး ဘာတွေဖြစ်ကြသေးလဲ..” ” အင်း ပြောပါ့မယ်.. အဲဒါနဲ့ နွယ်လဲ အတော်လေး ထန်နေပြီလေ… နွယ်လက်ထဲမှာကိုယ့်ယောက်ျားထက်ကြီးတဲ့ လီးကြီးနဲ့.. စဉ်းစားကြည့်အုံး.. စိတ်ထဲမှာ ကလိကလိဖြစ်နေတာ.. အဲဒါကြီး ကိုင်ထားပြီး” ” သူက ကစ်ဆင်ဆွဲရင်း နွယ် နားရွက်တွေကိုလဲ စုပ်တယ်.. ပါးတွေကိုလဲ လျှာကြီးနဲ့လျက်တယ်.. အဲလိုနဲ့ ဇာတ်ရှိန်တွေတတ်နေရင်းက နွယ်လဲ အပေါ်ပိုင်းဗလာကျင်းသွားတယ်.. ” ” အောက်ပိုင်းက နွယ် ပင်တီလေးပေါ်ကနေ ဖင်ကို ပွတ်လွန်းတော့ ပင်တီလေးက ဖင်ကြားမှာ ညှပ်နေတယ်လေ.. စကပ်ကို ပင့်တင်ထားတော့ ခါးပေါ်ရောက်နေတယ်..” ” နွယ်နို့တွေကို ဆွဲစုပ်သေးတယ်.. နွယ် နို့ ၂ ဖက်လုံးကို အလှည့်ကျဆွဲဆွဲစုပ်ရင်း.. နွယ်လေး.. ရဲ့.. အဖုတ်ကို စပြီးနှိုက်တော့တာပဲ.. နွယ်က ပေါင်ကိုစိထားပါသေးတယ်.. ဒါမဲ့.. ကိုဘစီအရမ်းသန်တယ်..” ” သူလက်ကြမ်းကြမ်းကြီးနဲ့ အတင်းပေါင်ကြားထဲကို နှိုက်တယ်.. ဟိုလေ.. နွယ်ရဲ့ အစိလေးကို သူ့လက်ခလယ်နဲ့ ပွတ်ပေးတယ်သိလား.. နွယ် အရမ်းရင်တုန်တာပဲ.. နွယ်လဲ အသံတွေထွက်တာ မထိန်းနိုင်ဘူး” ” လူက အလိုးမခံရသေးခင်က မောနေပြီ.. အဲဒါနွယ်လဲ နံရံမှီရက်နဲ့ ခြေထောက်တွေတောင် မခိုင်တော့ဘူး ခွေကျသွားတယ်.. အဲဒီမှာ ဘာပြောကောင်းမလဲ.. သူ့လီးကြီးနဲ့ နွယ် မျက်နှာနဲ့ တည့်တည့်ကြီးဖြစ်သွားတယ်” ကိုထူး နားထောင်ရင်းကနေ အသက်ရှူသံတွေ မြန်သထက် မြန်လာတယ်လေ။
နွယ်က ကိုဘစီနဲ့လိုးခံရပုံတွေ ပြောပေး.. သူက သူ့လီးသူ ကိုင်ပြီး ပွတ်နေတယ်..။နွယ်လဲ ကိုဘစီနဲ့ လိုးခဲ့ရတာ အခုပြန်ပြော အခု ရင်ခုန်တယ်။ ” ဟာ.. နွယ်ရာ.. ဆက်ပြောလေဟာ ဘာကြောင်နေတာလဲ..” ကျမလဲ နည်းနည်းမူချင်တာနဲ့… ” တော်ပြီ ကိုထူးရာ.. ဆက်တွေးလိုက်တော့ နွယ်လဲ ပြောရတာ ရှက်တယ်..” ” အံမလေး နွယ်ရယ်.. သူများလီးနဲ့တောင် အလိုးခံလာရပြီးပြီကို အခုမှ ရှက်နေသေးတယ်..” ” ဒါကတော့ ကိုထူးလဲ သဘောတူ.. နွယ်လဲ.. အင်း.. ခံချင်သွားတာကိုးး..” ” ခံပါ… ခံပါ.. မယ်မင်းကြီးမ စိတ်ကြိုက်ခံပါ.. အခု ဆက်ပြောအုံး.. နောက် ဘာဆက်ဖြစ်သေးလဲ” ” အဲ့ချိန်မှာ ကိုဘစီလီးမာမာကြီးက နွယ် မျက်နှာနားကို ရောက်နေပြီ..။” ” ကိုဘစီက လည်တယ်သိလား.. သူ့လီးကြီး နွယ် ပါးစပ်နားလာတေ့ပေးတယ်..။ နွယ်လဲ အစတော့ ရွံသလိုခံစားရပေမဲ့ ဒါက မဖြစ်မနေကြုံတွေ့ရမှာပဲဆိုပြီး စိတ်ဖြေလိုက်ရတယ်..” ” အဲဒါနဲ့ သူ့လီးကြီး နွယ်. ပါးစပ်ထဲဝင်ဖို့ နှုပ်ခမ်းကို ဟစိလေးလုပ်ပေးလိုက်တယ်.. ဟုတ်တယ်လေ ပါးစပ်ကို လုံးဝြကီး ဟမပေးရဲပါဘူး.. တော်ကြာ နွယ်ကို ဘယ်ကတည်းက လီးစုပ်ချင်နေလဲ ထင်ခံရမှာပေါ့” ” ကိုယ်ကသာ အဲလိုတွေးနေတာ.. သူက နွယ် ပါးစပ်လေး ဟစိလုပ်လိုက်တာနဲ့ တခါထဲ နွယ်ခေါင်းကို ကိုင်တဲ့ပြီး သူလီးကြီးနဲ့ နွယ် ပါစပ်လေးထဲကို ထိုးထည့်တော့တာပဲ.. ” ” နွယ် ပါးစပ်ထဲ ကိုဘစီလီးကပြည့်နေတာ.. တကယ် နွယ် လေ ဆို့ နင် သွားတယ်.. အန်ချင်သလိုဖြစ်ပြီး အွပ် ခနဲဖြစ်သွားတာ.. လီးကရှည်တော့ လှည်ချောင်းကို လာထောက်တာလေ။” ” အမလေး ဒါတောင် သူ့လီးကြီးကနွယ်ပါးစပ်ထဲကို အကုန်မဝင်သေးဘူး.. တဝက်ကျော်ကျော်ပဲရှိသေးတာ..” ” အဲဒါ သူ့လီးကြီးကို နွယ် ပါးစပ်ထဲ စုပ်ခိုင်းထားပြီး ထိုးထည့်ထားတာ.. နွယ် အတော်လေး အသက်ရှူတွေကြပ်လာတယ်.. ” ” ဟုတ်တယ်လေ ပါးစပ်နဲ့လီးက အပြည့်ပဲကို.. ပြီးတော့ လီးကြီးက လည်ချောင်းထဲထိ ထောက်နေတာဆိုတော့ အသက်ရှူလို့ မရဘူး… ” ” အဲဒါနဲ့ နွယ်လဲ တတ်နိုင်သလောက် အသံထွက်အောင် အု အု အွပ် အွပ် လို့အော်ပြီး ကိုဘစီရဲ့ ပေါင်ကို လက်နဲ့ ပုတ်ပုတ်ပြီး သူ့လီးကြီးကို ပါးစပ်ထဲကထုတ်ပေးဖို့ပြောရတယ်..” ” အဲခါကျမှ သူက သူ့လီးကို ဆွဲထုတ်ပေးတယ်.. အဲအချိန်လေး အသက်ဝအောင်ရှူရတာပဲ.. ပါးစပ်ထဲက သွားရေတွေကျတာ အများကြီးပဲ ကြမ်းပြင်မှာ ပေပွလို့.. ပြီးတော့ မျက်ရည်တွေပါထွက်တယ်..” ” သူ့လီးကြီးမှာလဲ ယုရဲ့ သွားရည်တွေရယ်.. နောက်ပြီး သူ့လီးကထွက်တဲ့ ရှေ့ပြေးအရည်ကြည်တွေရယ်နဲ့ လီးကြီးက အရည်တွေဆက်လက်ကျပြီး ပြောင်ချောနေရောပဲ..” ” အဲဒါ.. နွယ်ကို နံရံမှာကျောမှီထိုင်ခိုင်းရင်း ပါးစပ်ကိုလိုးတော့တာပဲ.. နွယ်လဲ ပါးစပ်ထဲ လီးအဝင်အထွက်ကို ချိန်ပြီး မနည်းအသက်ရှူရတယ်.. ” ။
ကျမက ပြောနေရင်းနဲ့ နှုတ်ခမ်းကိုသပ်ပြလိုက်တော့ ကိုထူး စိတ်တွေပိုထလာတယ်.. ကျမ နှုပ်ခမ်းလေးကို လာကိုင်ပြီး ပြောသေးတယ်.. ” ဒီနှုတ်ခမ်းလေးက တခြားလီးကို စုပ်ဖူးသွားပြီပေါ့နော်” တဲ့.. ” အဲလို နွယ် ပါးစပ်ကို ၅ မိနစ်လောက် လိုးပြီးတော့ သူက နွယ်ကို ချိုင်းကနေဆွဲမလိုက်တယ်.. ပြီးတော့ နွယ်ကို နံရံဖက်ဆွဲလှည့်ပြီး လက် ၂ဖက်ကို နံရံမှထောက်ခိုင်းပြီး ဖင်ကို နောက်ကို ကော့ခိုင်းလိုက်တယ်..” ” အဲကတည်းက နွယ် သိလိုက်ပြီ… သူ နွယ် ကို နောက်ကနေ ဆောင့်လိုးတော့မယ်ဆိုတာ..” ” နွယ်ရဲ့ ပင်တီလေးကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆွဲချွတ်ချလိုက်ပြီး ထင်တဲ့အတိုင်းပြီး ကိုဘစီက သူ့လီး ကော့ကော့ကြီးနဲ့ နွယ် အဖုတ်ကို လာတေ့တယ်.. ” ” နွယ်လဲ အစက ကြောက်တော့… နွယ် အဖုတ်ကို လက်နဲ့ နောက်ပြန်ကာပြီး မလုပ်ပါနဲ့ ကိုဘစီရယ်.. ကျမမှာ ယောက်ျားရှိတယ်ဆိုပြီး ပြောမိပြောရာ ပြောလိုက်မိသေးတယ်” ” သူ့ကြည့်ရတာ ဂရုစိုက်ပုံလဲ မရဘူး.. ကာထားတဲ့ နွယ် လက်ကို လိမ်ချုပ်တဲ့ပြီး နွယ်ခါးပေါ်နောက်ပြန်အနေအထားနဲ့တင်လိုက်တယ်.. ချုပ်လိုးသလိုပေါ့..” ” သူ တအားကို ထန်နေပြီ.. အရမ်းမုန်ယိုနေတာ ဘာမှကို မမြင်တော့ဘူး.. အဲဒါ နွယ်ကို လေသံမာမာနဲ့ ပေါင်ကားခိုင်းတယ်.. ဖင်ကို နောက်ကိုကောက်ခိုင်းတယ်..” ” အရည်တွေရွှဲနေတဲ့ နွယ် အဖုတ်က နောက်ကို ပြူးပြီးထွက်နေတာပေါ့.. မနေ့ကမှ အမွေးတွေကို ရိပ်ထားတော့ ကိုဘစီအတွက် အဆင်သင့်ကိုဖြစ်နေရောပဲ..” ” အဲဒါ သူ့လီးကို တေ့ပြီး အတင်းကို ဖိ ဆောင့်ချပစ်တယ် ကိုထူးရယ်… ” ” လီးကြီးက ကြီးလိုက်တာဆိုတော့ အဖုတ်ထဲရောက်မှ ပိုသိသာတယ်.. အဖုတ်နံရံတွေက သူ့လီးပေါ်အကြောတွေကို ခံစားမိနေသလိုပဲ” ” သူ ဆောင့်လိုးလိုက်တော့နွယ် အော်ရတယ်.. မျက်နှာလေး အပေါ်ကို မော့တတ်သွားတယ်..” ” နွယ် အဖုတ်ထဲမှာ ကိုထူးလီးမဟုတ်ဘဲ တခြားသူရဲ့ လီးကြီးက မညှာ မတာလိုးနေတဲ့ အသိက ဝမ်းနည်းရမလိုလို စိတ်လှုပ်ရှားရမလိုလိုနဲ့ ကိုထူးရယ်..” ” သူ ဆက်တိုက်ဆောင့်တယ်..နွယ်လဲ အသံတော်တော်ထွက်အောင် အော်မိတယ်.. လီးနဲ့ အဖုတ်လိုးတဲ့အသံတွေလဲ ဆူနေတာပဲ.. တဆုံးဝင် တဆုံးထုတ် လိုးတာကိုးး သူက..” ” ဆောင့်လိုက်တိုင်း တုန်တုန်သွားတဲ့ နွယ် ဖင်တွေကို တဖြန်းဖြန်းရိုက်သေးတယ်.. ။
ဖင်မှာ အရှိုးရာတောင် ထင်မလား မသိဘူး ခဏနေ ရေချိုးတော့မှ ကြည့်ရအုံးမယ်..” ” အဲဒါ.. အင်း.. ဟို.. လေ.. နွယ် တစ်ခု ဝန်ခံမယ်.. နွယ် ပြီးသွားတယ် သိလား..” ” နွယ်လဲ ပြီးရော.. သူဆောင့်ချက်တွေ ပိုပိုကြမ်းလာတယ်.. နွယ်လဲ စိတ်လွတ်ပြီး ဘာတွေပြောမိလဲ မမှတ်မိဘူး… လိုးနိုင်လိုက်တာ ကိုဘစီရယ်လို့ ချီးကျူးသလို ပြောမိတာပဲ မှတ်မိတယ်” ” အချက် ၅၀ လောက်လဲ ရောက်ရော သူ့လီးကြီးက ပိုကြီးသလိုခံစားရပြီး အဖုတ်ထဲကို တဆုံးနှစ်ထားရင်း လရည်တွေ ပန်းထည့်တယ်လေ… အဲဒါ ခဏနေ ကိုထူး နွယ်လေး အတွက် အီးဇီးတူး သွားဝယ်ပေးအုံး” ” သူ့လီးက ရှည်တော့ လရည်တွေက သားအိမ်ထဲကို တန်းနေတာပဲ.. အပြင်တောင်ပြန်မထွက်လာဘူး..” ” သူ့လရည်တွေ နွယ်အဖုတ်ထဲ အပြည့်ဖြည့်ပြီးရော သူလဲ မောပြီး နွယ်ကျောပေါ်ကုန်းပြီးမှီချလိုက်တယ်..” ” နွယ်က အဆောင့်ခံရလွန်းလို့ နံရမှာတောင် လက်မထောက်နိုင်တော့ဘူး မျက်နာနဲ့ ရင်ဘက် နံရံကို ကပ်ပြီး ဖင်ကော့ခံနေရတာ..” ” နွယ်လဲ မောတာနဲ့ အဲဒီအခန်းထဲ ဆိုဖာပေါ်မှာ အဝတ်မပါပဲ ဖင်တုံးလုံးကြီးအိပ်ပျော်သွားတယ်..” ပြီးပါပြီ။
ဘယျ နှဈ ယောကျ ဖွဈ ဖွဈ